Erik Johansson dia mampiseho amintsika ny fizotrany mamorona | Famoronana an-tserasera
Mampianatra antsika ny fomba famoronany ny sangan'asany amin'ny YouTube ny manam-pahaizana momba ny Photoshop Erik Johansson
Manana YouTube mamela antsika hiditra amin'ny fomba fiasan'ny matihanina amin'ny famolavolana sasany, ankoatry ny fahafahany manatrika fampianarana an-jatony hahitanao ireo teknika mandroso indrindra amin'izao fotoana izao. Sambatra isika amin'izao androntsika izao, fa ny fananana fahalianana kely sy faniriana dia afaka ampianarina samirery isika nefa tsy mandany vola be any amin'ny sekoly tsara indrindra, na dia mora ampiasaina aza izany mba hamoronana fifandraisana mandritra ny taona maro amin'ny fampianarana.
Erik Johansson dia iray amin'ireo tompona Photoshop izay mampiseho amintsika ny fahaizany sy famoronana saika tsy manam-petra miaraka amin'ireo vinavina izay nataony tamin'ny fomba izay mamela antsika tsy hiteny amin'ny sasany amin'ireo zavatra noforoniny. Efa nahita azy isika mandehana amin'ireto tsipika ireto teo aloha fa androany dia tsara vintana isika amin'ny fidirana amin'ny horonan-tsary tsirairay amin'ny sary malaza indrindra, izay ahitantsika ny fizotran'ny famoronana.
Ireo dia avy amin'ny fotoana fa diso hevitra izahay mahita ny fomba filalaovan'ity mpamorona ity matihanina ity etsy sy eroa ao amin'ny Photoshop hamoronana ireny foron-jiro optique ireny sy ireo fanodinkodinna sary manana kalitao sy eritreritra lehibe.
Afaka niantso azy ireo ny majika raha tsy nandalo ireo horonantsary ireo izahay tao amin'ny YouTube izay mampiseho ao ambadiky ny seho sy ny dingana famoronana rehetra ampiasainy hanatrarana izany asa vita izany.
Ankoatry ny fampiasana betsaka ny Photoshop, ny lahatsariny koa dia mampiseho ny fifangaroan'ny tontolo tena izy sy sary an-tsaina amin'ny sarinao. Ho an'ny ankamaroan'ny sarinao tsy azo antoka dia mila maka sary singa samihafa amin'ny sary ianao amin'ny tena fiainana alohan'ny hanombohanao manambatra azy ireo ary mamorona ireo sosona ilaina ao amin'ny Photoshop.
Vahaolana tsotra toy ny tavoahangy na taratasy mihorona, dia hiova ho asany tsy ampoizina eo imasontsika. Azonao atao ny miditra amin'ny tranonkalany erikjohanssonphoto.com, ny facebook-nao, ny instagram ary ny azy Twitter.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mampianatra antsika ny fomba famoronany ny sangan'asany amin'ny YouTube ny manam-pahaizana momba ny Photoshop Erik Johansson
Luis E. Morales dia hoy izy:
mihoatra ny mahagaga, ny fahatsorana dia mahatonga anao hieritreritra fa majika!
Valiny tamin'i Luis E. Morales
SrVelaz dia hoy izy:
Ny marina dia tiako ny talenta an'ity artista ity. Maniry aho fa afaka manao, farafaharatsiny zavatra mitovy amin'izany.
Mamaly an'i SrVelaz
Biby ity artista ity!